Installation XP SP2 on MacBook Pro - MYSTERY ZILLION
Installation XP SP2 on MacBook Pro
December 2002 edited February 2011 in Mac
ကျွန်တော် Parallel နဲ့ သုံးနေတာတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။
ကျွန်တော် သူငယ်ချင်း mac book pro ကို window XP တင်ကြည့်တာ ပြသနာ တက်နေလို့ mac crazy တွေကို မေးချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကြုံတွေနေရတာတွေကို ဒီ thread အောက်မှာ စုပြီးမေးချင်ပါတယ်။
XP ကို install လုပ်ဖို့ နည်းလမ်း ဘယ်နှမျိုးရှိပါသလဲ ?
သိသလောက်တော့ bootcamp နဲ့ virtual box တွေရှိတယ်။ နှစ်မျိုးလုံးကို တစ်ခါစီလုပ်ကြည့်ပြီးပါပြီ။
bootcamp အတွက် ref link: http://www.askdavetaylor.com/how_do_i_install_windows_xp_on_my_mac_using_boot_camp_1.html
ပြသနာတတ်တာက XP install လုပ်တုန်း restart ပြန်တတ်တဲ့ အချိန်မှာ "Press any key to boot from CD. Disk Error. Press any key to restart"
အဲလိုပြောတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ဒီကိုသွားပြီး http://support.apple.com/kb/TS1722 သူပြောတဲ့ အတိုင်းလုပ်သော်လည်း မရသေးပါ။ ကျွန်တော့ XP ကတော့ pirated version ပါ။
virtual box နဲ့ လုပ်တဲ့အခါ
ref link: http://www.lowfokus.com/?p=551
ပြသနာတတ်တာက ၅ ပုံမြောက်က create လုပ်တဲ့ နေရာမှာပါ။ error တတ်ပြီး ရှေ့မဆက်နိုင်ဘူး။ အိပ်ချင်မူးတူး ဖြစ်ပြီး error message ကိုမှတ်ဖို့မေ့သွားတယ်ဗျာ။ ဒီညကို ပြန်စမ်းချင်လို့ ကြုံတွေ့ဘူးတဲ့သူများ share ကြပါခင်ဗျာ။
BootCamp နဲ့တော့ မစမ်းဖူးပါ..
ကျနော်သုုံးတာ VMWare Fusion နဲ့ပါ.. အဆင်ပြေပါသည်..
အိုကေဗျာ။ keygen ဒေါင်းပြီးသား ရှိရင် တစ်နေရာရာမှာ ပြန်တင်ပေးပါလား။ ကျွန်တော် rs အဆင်မပြေလို့ပါ။ :biggrin:
I use Parallel Destop.
VMWare Fusion ကိုတော့ download ချပြီးသွားပြီဗျ။ ဒီညမှ ပြန်စမ်းပါအုံးမယ်။
ကျနော်ကတော့ VMWare Fusion ကော.. Bootcamp ကောနှစ်မျိုးလုံးသုံးတယ်။ Fusion မှာ ရုံးမှာသုံးဖို့ XP နဲ့ တစ်ခါတစ်လေစမ်းသပ်ဖို့ Ubuntu တင်ထားပါတယ်..။ Bootcamp မှာကတော့ ဂိမ်းကစားဖို့သက်သက်ပဲ Windows7တင်ထားပါတယ်..:biggrin:။
VM တွေအများကြီးမှာ ကျနော်ကတော့ Fusion ကိုပိုသဘောကျပါတယ်..။ သူ့ရဲ့ unity view, snapshots လုပ်နိုင်တာတွေကို ကြိုက်ပါတယ်..။ bootcamp နဲ့တင်မယ်ဆိုရင်တော့ Windows တင်ပြီးတာနဲ့ Macbook ၀ယ်တုန်းကပါလာတဲ့ OSX DVD နဲ့ Bootcamp driver တွေတင်ပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်..။ ပြီးရင် Apple Software Update ကနေ Bootcamp 3.1 ကို update လုပ်ပေးရပါမယ်..။
ဒီနေရာမှာကြုံတုန်း bootcamp သမားတွေအတွက် အသုံး၀င်မယ့် ဆော့ဖ်၀ဲလ်လေးတစ်ခုကို ပြောချင်ပါတယ်..။ Paragon CampTune ဆိုတာလေးပါ..။ အတိုးအလျှော့လုပ်ရတာလက်၀င်တဲ့ bootcamp partition တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်..။
Sometimes, Bootcamp doesn't works with Hacked XP CDs, Maybe got to do with Genuine XP install. Mine can't installed.. but used Parallel which alright with me...